Akhriso: Xogtii ugu cusleyd ee Mahad Salaad ka qoray Kiiska Ikraan Tahliil, kadib markii la waayey - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Akhriso: Xogtii ugu cusleyd ee Mahad Salaad ka qoray Kiiska Ikraan Tahliil, kadib markii la waayey - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Agaasmihii hore ee NISA Fahad Yaasiin ayaa ku eedeeyay agaasimaha xilka ugu danbeeyay inuu ka danbeeyay abaabulka dilka Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd Hay’adda NISA, isla markaana ay qeyb ku lahaayeen Ra’iisal wasaare Maxmaed Xuseen Rooble iyo Wasiir ku xigeen C/raxmaan Al-cadaalla.
Eedeyntan oo ka mid ahayd wareysi lala yeeshay Fahad Yaasiin ayuu si toos ah weerar ugu qaaday Mahad Salaad oo xilliga la waayey Ikraan Tahliil ahaa xildhibaan Golaha Shacabka, isagoo sheegay inuu xiriir dhow la leeyahay Mahad Karate oo ka tirsan madaxda Sare ee Alshabaab.
Haddana waxaan halkaan dib idinkugu xusuusineyaa halgankii dheeraa ee Xildhibaan Mahad Salaad iyo Fahad Yaasiin dhex maray, xilligas oo Mahad Salaad uu adeegsan jiray baraha bulshada.
Qormada soo socota waa ugu horeysay, uguna xasaasineyd ee xildhibaan Mahad Salaad ka qoray Kiiska Ikraan 22 July 2021, kadib muddo bil ku dhowaad ah markii uu falku dhacay:
Qorshaha khaarijinta Ikraan Tahliil waxa soo maleegay Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis, fulintiisana waxaa u xilsaarnaa Yaasiin Farey!
Xog rasmi ah oo aan ka helay saraakiil sarsare oo ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda in muddo ahna aan dabo socday xaqiijinteeda waxay sheegaysaa in mar hore la dejiyay qorshaha lagu khaarijinayo Ikraan Tahliil. Ikraan oo dalka ka maqneed markii shirqoolka loo maleegay ayaa lagu qarash gareeyay boqolaal kun oo dollar iyo balanqaadyo been ah si dalka dib loogu soo celiyo loona khaarijiyo!
Ikraan markii dalka ay ku soo laabatay isla markiiba waxaa la xaddiday dhaqdhaqaaqeeda, waxaana loo xilsaaray dabaggalka iyo la socodka Ikraan Taliyaha Nabad Sugidda Gobolka Banaadir Yaasiin Farey. Wuxuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Ikraan ay wada hadleen kahor inta uusan go’in xiriirkeeda!
Qorshaha khaarijinta Ikraan oo markii hore la rabay in la qariyo ayaa markii qoyskeeda qaylo-dhaantu ka soo yeertay Fahad Yaasiin isku dayay in uu Alshabaab lacag ku siiyo si ay u sheegtaan dilka Ikraan Tahliil lkn waa guul dareystay isku daygaas kadib markii ay soo farageliyeen sida la sheegay saraakiil sarsare oo Alshabaab ka tirsan qaraabo dhawna ay yihiin Ikraan.
Sababta Ikraan in la dilo loo go’aamiyay ayaa la ii sheegay labo arimood oo aad xasaasi u ah oo ay macluumaad ka heysay, kuwaas ku saabsanaa sidii loo qorsheeyay dilkii Allaha u naxariistee Eng. Yariisow oo xafiiskiisa ay madax ka ahayd iyo arimo waaweyn oo Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis ku lug leeyihiin!
Ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa in ay qabsadaan Qareeno dabogal iyo baaritaan ku soo sameeya shirqoolka Ikraan si looga gungaaro fal dambiyeedka dhacay, loona cadeeyo cida ka mas’uulka ah!
Federaalka July 3, 2022
Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacacaabay xoghayaha joogtada xafiiskiisa Ra’isul Wasaaraha, la-taliyaal iyo xilal kale oo kooxda la shaqeyn doonto ah. Xoghayaha...
BREAKING NEWS July 3, 2022
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeyey ogolaansho ay dalka uga shaqeeyaan siiyey laba Banki oo ajnabi ah oo laga kleeyahay dalalka Turkiga iyo Masar. Qoraal...
Ra'iisal wasaaraha cusub ee xukuumadda Federaalka Xamsa Cabdi Barre ayaa sameeyay magacaabidii ugu horeysay tan iyo markii uu helay codka kalsoonida, lana wareegay xafiiska. Xamza...
Agaasimaha cusub ee Hay'adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) Mahad Maxamed Salaad ayaa dib u habeyn xoog leh ku wada Hay'adda NISA, kadib markii...
Federaalka July 2, 2022
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu socdaalkii labaad Berri uga dhoofo dalka, kadib doorashadiisii 16 May 2022, isagoo kusii jeeda dalka...
Allaha u naxariistee waxaa caawa magaalada Hargeysa ku geeriyootay fannaanadii caanka ahayd ee Khadra Daahir Cige oo muddooyinkan xanuunsaneysay. Khadra Daahir ayaa xaaladeeda caafimaad lagula...
Bulshada July 2, 2022
Dagaalka baraha bulshada ku dhex maraya taageerayaasha madaxweynaha iyo Ra'iisal wasaarihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa weji cusub yeeshay maalmihii...
Madaxtooyada June 26, 2022
Waxaa socda ololaha loogu jiro magacaabidda Golaha wasiirada xukuumadda cusub ee Ra'iisal wasaare Xamsa Cabdi Barre, kadib markii uu shalay helay codka kalsoonida Golaha...
Federaalka June 22, 2022
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii afraad ku sugan dalka Imaaraadka Carabta, iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixin safarkiisa, loona bedelay mid...
Saddex sabab oo Xasan Sheekh looga fujin waayay Magacaabidda Xamza Abdi Barre (Akhriso)
Madaxtooyada June 16, 2022
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku dhawaaqay Ra'iisal wasaaraha cusub ee Soomaaliya, kadib muddo bil ah, markii mar kale loo doortay madaxweynaha Soomaaiiya...